Amafutha okushiswa kwe-Fat Loss powder series - I-AASraw powder
/ Imikhiqizo / I-Fat Loss powder
Singabathengisi be-Fat Loss powder, I-Fat Loss powder yokudayiswa, Njengoba sithembisile, wonke amafutha wethu we-Fat Loss ahlanzekile angaphansi kwe-98%.
Ukushisa kwe-Fat Loss
Kunezixazululo eziningi ezihlukene zokulahlekelwa kwesisindo lapho.
Lokhu kuhlanganisa zonke izinhlobo zamaphilisi, izidakamizwa kanye nezithako zemvelo.
Lawa kuthiwa akusize ulahlekelwe isisindo, noma okungenani wenze kube lula ukulahlekelwa isisindo kuhlanganise nezinye izindlela.
Bavame ukusebenza ngeyodwa noma ngaphezulu yalezi zindlela:
Nciphisa ukudla, okwenza ube nomuzwa ogcwele kakhulu ukuze udle amakholori ambalwa
Nciphise ukumunca kwezakhi ezifana namafutha, okwenza uthathe amakholori ambalwa
Ukwandisa ukushisa kwamafutha, okwenza ushise amakholori amaningi
Ingabe imithi ingayithatha indawo yokuzivocavoca kanye nemikhuba yokudla enempilo njengendlela yokulahlekelwa isisindo?
Imithi ayiyithathi indawo yomzimba noma imikhuba yokudla enempilo njengendlela yokulahlekelwa isisindo. Ucwaningo lubonisa ukuthi imithi yokuphuza ukuphuza isasebenza kakhulu uma ihlanganiswa nenqubo yokuphila. Buza udokotela wakho noma omunye ochwepheshe wezokunakekelwa kwezempilo mayelana nezinhlelo zokwelapha zokuphila ukuze uthole ukuphathwa kwesisindo okuzosebenza kuwe.
Ziyini izinzuzo zokusebenzisa imithi yokwelashwa ukuze ulahlekelwe isisindo?
Uma kuhlangene nezinguquko ekuziphatheni, kuhlanganise nokudla nemikhuba yokusebenza ngokomzimba, imithi yokwelashwa ingasiza abanye abantu ukuba banciphise isisindo. Ngokwesilinganiso, abantu abathatha imishanguzo yezokwelapha njengengxenye yohlelo lokuphila balahlekelwa phakathi kwe-3 ne-9 amaphesenti ngaphezulu kwesisindo somzimba sabo sokuqala kunabantu abaphila ohlelweni lokuphila abangathathi imithi. Ucwaningo lubonisa ukuthi abanye abantu abathatha imithi yesisindo-ukulahlekelwa kwemithi balahlekelwa amaphesenti angu-10 noma ngaphezulu kwesisindo sabo sokuqala. Imiphumela ye-1 ihlukahluka ngemithi nangomuntu.
Ukulahlekelwa kwesisindo se-5 kuya kumaphesenti angu-10 wesisindo sakho sokuqala kungasiza ekuthuthukiseni impilo yakho ngokunciphisa ushukela wegazi, ukucindezelwa kwegazi kanye ne-triglycerides. Ukulahlekelwa isisindo nakho kungathuthukisa ezinye izinkinga zempilo ezihlobene nokukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala, okufana nobuhlungu obuhlangene noma i-apnea yokulala. Ukulahlekelwa kwesisindo kuningi kwenzeka ezinyangeni zokuqala ze-6 zokuqala imithi.
Nakhu okufanele ukwazi mayelana nemithi yokunciphisa isisindo evame kakhulu: I-Orlistat powder, i-Bitter Orange / i-Synephrine powder, i-Sibutramine powder, i-Clenbuterol HCL powder, i-Phentermine powder, ne-Lorcaserin HCL powder, i-Cetilistat powder.
I-1. I-Orlistat powder
I-Orlistat powder iyisidakamizwa sezokwelapha, esithengiswa phezu kwe-counter ngaphansi kwegama elithi Alli, futhi ngaphansi kwesiguli njengoba i-Xenical. I-Orlistat powder, eyaziwa nangokuthi i-Alli noma i-Xenical, inganciphisa inani lamanoni owawuthola ekudleni futhi akusize ulahlekelwe isisindo. Inemiphumela emibi eminingi, ezinye zazo ezingamnandi kakhulu.
Ngokuthakazelisayo, ukudla okuphansi kwe-carb (ngaphandle kwezidakamizwa) kuboniswe ukuthi kuphumelele njengoba kokubili i-orlistat powder nokudla okunamafutha aphansi kuhlangene.
I-2. I-Bitter Orange / Synephrine powder
Uhlobo lwe-orange olubizwa ngokuthi i-orange orange lune-powder synephrine. I-Synephrine powder ihlobene ne-ephedrine, eyayisetshenziswa njengesithako esidumile ekufakweni kwamaphilisi amaningi okunciphisa umzimba.
I-Synephrine powder ivuselela kahle, futhi mhlawumbe isebenza kahle ekulahlekeni kwesisindo esikhathini esifushane. Noma kunjalo, imiphumela emibi ingaba yingozi, ngakho-ke lokhu kumele kusetshenziswe kuphela ngokuqapha okukhulu.
3. I-Sibutramine powder
I-Sibutramine powder ithinta amakhemikhali ebuchosheni obuthinta ukugcinwa kwesisindo. I-Sibutramine powder isetshenziselwa kanye nokudla nokuzivocavoca ukwelapha ukukhuluphala okungase kuhlobene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, noma ukucindezelwa kwegazi eliphezulu.
I-Sibutramine powder ingathathwa noma ngaphandle kokudla. Kufanele ulahlekelwe okungenani amakhilogremu angu-4 phakathi kwamasonto okuqala we-4 ukuthatha i-sibutramine powder nokudla ukudla okuphansi kwekhalori. Tshela udokotela wakho uma ungalahlekelwa okungenani amakhilogremu angu-4 ngemuva kokuthatha imithi yamaviki e-4.
I-4. I-Clenbuterol HCL powder
I-Clenbutrol HCL powder iyisengezo esizama ukulingisa isenzo sokusha kwamafutha nesisindo sokunciphisa isisindo se-Clenbuterol HCL powder. Imiphumela ye-HCL ye-Clenbuterol iyamangalisa futhi isekelwa yinqwaba yosaziwayo nabadlali, kubandakanya uJessica Hardy noVictoria Beckham. Ishisa amanoni “ngokwandisa izinga lapho amafutha omzimba ehlanganiswa khona ngenkathi kukhuphuka izinga lomzimba lomzimba” - ngamanye amagama, yisidakamizwa esikahle sokunciphisa umzimba.
Ukuthenga ukukhululeka kwesisindo / isidakamizwa sokudla isidakamizwa esiluhlaza kudingeka iqaphe kakhulu, ikakhulukazi ngokuthengwa kwamanye amazwe. Kunemithombo emibili eminingi ethi ihlinzeka ngezimpahla zobuhlakani kepha ziboniswe njengezingcweti. I-AASraw inikeza futhi inikeza kuphela izimpahla zobuhlakani.
Ibonisa 1-8 yemiphumela engu-15
I-Synephrine HCL powder